Inona no zavatra iainan'ny mpampiasa ary inona no ataon'ny mpamorona UX? Famoronana an-tserasera
Encarni Arcoya | 04/09/2021 13:00 | maro
Efa nandre momba ny traikefan'ny mpampiasa ve ianao? Angamba avy amina mpamorona UX? Izy ireo dia hevitra roa izay tokony hazavainao tsara satria mirongatra izy ireo ary azo inoana fa amin'ny ho avy tsy ho ela dia manam-pahaizana manokana izy ireo izay be fangatahana.
fa, Inona no zavatra iainan'ny mpampiasa? Inona no mpamorona UX? Raha tsy fantatrao izay lazainay, dia holazainay aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao.
1 Inona ny famolavolana UX ary inona no ifandraisany amin'ny traikefan'ny mpampiasa
2 Inona no mpamorona UX
2.1 Fahaizana mpamorona UX
3 Inona ny zavatra niainan'ny mpampiasa
Inona ny famolavolana UX ary inona no ifandraisany amin'ny traikefan'ny mpampiasa
Voalohany indrindra, hanomboka amin'ny famolavolana UX isika, satria raha tsy azonao io hevitra io dia mety ho sarotra kokoa ny mahazo ny hafa. Ny famolavolana UX, fantatra ihany koa amin'ny famolavolana traikefa ho an'ny mpampiasa, dia tsy misy afa-tsy andian-dahatsoratra dingana izay tanterahina amin'ny tanjona famoronana vokatra manome fahafaham-po ny mpampiasa, raha manome traikefa mety, ary miorina amin'ny fahalalana azony.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia ny fizotran'ny vokatra namboarina mba hamahan'izy ireo ny filan'ny mpampiasa. Ohatra, mieritreritra mop. Tamin'ny androny, rehefa noforonina izy, ny olona namorona azy, Manuel Jalón, heverintsika fa nieritreritra ireo vehivavy ireo izay tsy maintsy nandohalika izy ary nanolana lamba mba hahafahany hikosoka ny gorodona, ary te hanampy izy ataovy mora zaka kokoa io asa io. Izany hoe nitady vokatra hamaha ny filan'ny mpihaino izy ireo ary, ho fanampin'izany, hanamora ny zavatra rehetra ho azy ireo.
Azonao ve izao hoe inona ny famolavolana UX?
Miaraka amin'ny ohatra amin'izao fotoana izao dia manana mpandahateny marani-tsaina, finday sns isika. Izy ireo dia vokatra izay namboarina nifototra tamin'ny mpampiasa sy ny fampiasana izay homena azy ireo. Raha ny momba ny finday dia kely ny efijery tamin'ny voalohany satria nampiasana fotsiny izy io, fa izao ny miantso no atao kely indrindra, lehibe kokoa ny efijery hanatsarana ny fivezivezena ary koa afaka mandefa hafatra.
Inona no mpamorona UX
Satria fantatsika ny famolavolana UX, ny zavatra manaraka tokony ho fantatrao dia ny atao hoe mpamorona UX ary ny antony ifandraisany amin'ny traikefan'ny mpampiasa. Ary io tranga io dia miresaka momba ilay olona tompon'andraikitra amin'izany isika mitady ny vahaolana amin'ny olana miorina amin'ny filan'ny mpihaino kendrena. Izany hoe, hahatonga ny vokatra ilaina hahasoa ilay olona hamaly izay ilainy.
Manome anao ohatra iray indray izahay: Alaivo an-tsaina hoe manana telefaona finday ianao. Nametraka ampahany amin'ny karatra ianao, tranga iray hifanaraka amin'ny finday ... Hatreto aloha. Ahoana anefa raha mivadika miankavia sy miankavanana ny raharaha fa tsy miankavanana sy miankavia? Amin'ity tranga ity, raha olona havia ny mpihaino anao dia hohatsarainao ny fahaizany mampiasa azy, fa ahoana kosa raha tsy izy ireo? Ho an'ny tànana ankavanana, ity fonony ity dia mety tsy hahazo aina, ary, noho izany, hiafara amin'ny tsy fampiasan'izy ireo izany.
Natokana ho an'izany ny mpamorona UX, hamolavolana ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny fomba tsara indrindra hahazoana antoka fa afa-po amin'ny vokatra na serivisy izy (ary hamerina izy raha ilaina izany).
Fahaizana mpamorona UX
Mba ho matihanina amin'ny famolavolana UX, na ny traikefan'ny mpampiasa, ilaina ny fananana fahaiza-manao sasany tsy ananan'ny olona rehetra. Fa raha tena te-ho tonga ianao dia mila:
fiaraha-miory. Tokony hametraka ny tenanao amin'ny kiraron'ny olon-kafa ianao hahitanao izay mety ilain'izy ireo ary hanome azy ireo vokatra izay tena mifanaraka amin'ny ilain'izy ireo.
fandinihana. Indraindray, tsy ampy ny mametraka ny tenanao eo amin'ny toeran'ilay iray hafa, fa mila mandinika ihany koa ianao, jereo izay manelingelina azy na inona ny antsipiriany omeny anao amin'ny fomba fihetsika tsy ilazany anao am-bava. Satria ireo zavatra ireo no mety hahatonga ny vokatrao hifanaraka tsara kokoa amin'ilay mpampiasa.
fifandraisana. Tena zava-dehibe izany, satria mila mametraka fifandraisana tsara amin'ireo mpampiasa ianao, nefa koa amin'ny ekipa iray manontolo. Amin'ny lafiny iray, tsy maintsy fantatrao ny fomba hanehoanao izay rehetra tadiavinao hanana an'io vokatra io, satria, teo aloha, ianao dia efa naheno hoe milaza aminao momba ny olana mahazo azy ireo ny mpampiasa rehefa mampiasa zavatra.
Ny maha mpamorona UX dia tsy mora, ary tsy mora ny miasa amin'ny traikefan'ny mpampiasa. Na izany aza, asa iray izay be mpitia indrindra izy io ary manampy ny hafa hahita vokatra mifanaraka amin'ny zavatra ilainy.
Tokony ho fantatrao koa izany, ao anatin'ilay mpamolavola traikefa ho an'ny mpampiasa dia misy specialisations samihafa. Tsy ny rehetra dia natokana ho an'ny dingana rehetra amin'ny fizotrany, fa manokana amin'ny iray manokana. Ohatra:
Mpanoratra UX. Izy io dia natokana hamaritana ny fomba hifandraisan'ny olona amin'ilay mpampiasa. Mba hanaovana izany dia mandalina ny fitenin'izy ireo izy ary mampifanaraka ny vokatra mba hifandraisany amin'ny mpanjifa.
Mpikaroka traikefa amin'ny mpampiasa. Fantatra amin'ny anarana hoe UX Researcher, izy no olona hanadihady ireo mpampiasa hahalala hoe inona no ilain'izy ireo.
Famolavolana serivisy. Izy io dia iray izay mikasa ny hanatsara ny vokatra na serivisy mba hanavaozana azy ireo ary tena ilaina sy mahomby.
Inona ny zavatra niainan'ny mpampiasa
Ankehitriny rehefa hitanao daholo ireo voalaza etsy ambony ireo dia efa fantatrao fa ny UX dia User Experience. Ary mety ho azonao atao aza ny mahazo hevitra momba ilay resahina. Ary ny zava-niainan'ny mpampiasa dia a asa mitady hanatsarana vokatra na serivisy ho tombontsoan'ny mpampiasa. Izany hoe tadiavina fa mamaly ny filan'ny mpanjifa ity vokatra na serivisy ity ka te hampiasa azy izy na handany azy (ary hamerina).
Ity fotokevitra ity dia manan-danja kokoa ary azo ampiharina amin'ny sehatra maro, na amin'ny eCommerce na amin'ny endrika sary. Alao sary an-tsaina, ohatra, fa tsy maintsy mamorona bisikileta ianao. Mazava ho azy fa ny endriny dia hitovy amin'ny bisikileta rehetra, saingy tsy maintsy fantatrao izay hametrahana ireo singa rehetra mba hahatsapan'ny mpitaingina bisikileta fa mahazo aina izy amin'ny fampiasana azy. Midika izany fa fantatrao hoe ho aiza no mety indrindra ny pedal, ny kitapom-batsy, ny lasely, eny fa na dia ny mpihazona tavoahangy rano aza.
Moa ve mazava kokoa aminao izao ny traikefan'ny mpampiasa sy ny asan'ny mpamorona UX?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Inona no zavatra iainan'ny mpampiasa ary inona no ataon'ny mpamorona UX